Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Richardmille.to
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharxayaa siyaasadahayaga iyo nidaamkayaga ku saabsan ururinta, adeegsiga iyo bixinta macluumaadkaaga Markaad Adeegsato wuxuuna kuu sheegayaa Xuquuqdaada Asturnaanta iyo sida sharciga u dhowro.
Waxaan u adeegsaneynaa macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed inaan ku bixinno oo aan ku horumarinno Adeegga. Adeegsiga Adeegga, Waxaad ku raacsan tahay ururinta iyo adeegsiga macluumaadka si waafaqsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa loo sameeyay iyadoo la kaashanayo Generator Policy Privacy.
Erayada ay ku qoran yihiin xarafka ugu horeeya ee xaraf ahaan waxay leeyihiin macnayaal lagu qeexay shuruudaha soo socda. Qeexitaannada soo socdaa waxay lahaan doonaan macno isku mid ah iyadoon loo eegayn inay ka muuqdaan keli ama qaab ahaan.
Ujeeddooyinka Nidaamka Asturnaanta:
Account micnaheedu waa koonto gaar ah oo adiga laguu sameeyay si aad uhesho Adeegyadeena ama qaybo ka mid ah Adeeggeenna.
Country waxaa loola jeedaa: Massachusetts, Mareykanka
Adeeg bixiye waxaa loola jeedaa qof kasta oo dabiici ah ama sharci ah oo sameeya xogta isaga oo wakiil ka ah Shirkadda. Waxaa loola jeedaa shirkadaha saddexaad ama shakhsiyaadka u shaqeeya Shirkadda inay fududeeyaan Adeegga, inay bixiyaan Adeegga iyagoo matalaya Shirkadda, inay qabtaan howlaha la xiriira Adeegga ama inay ka caawiyaan Shirkadda falanqaynta sida Adeegga loo adeegsado.
Qeybta saddexaad ee Adeegga Warbaahinta Bulshada waxaa loola jeedaa degel kasta ama degel websaydh shabakad kasta kaas oo Adeegsaduhu ka gali karo ama abuuro koonto adeegsi Adeeg ah.
Macluumaadka Shakhsiga waa macluumaad kasta oo la xiriira shaqsi la aqoonsaday ama la aqoonsan karo.
cookies waa faylal yar-yar oo la geliyay kumbuyuutarkaaga, aaladda gacanta ama aalad kale barta internetka, oo ay kujiraan tafaasiisha taariikhda raadintaada boggeeda internetka adeegsiga badan.
Isticmaal Xogta waxaa loola jeedaa xogta si otomaatig ah looga aruuriyay, ama mid ay soo saartay adeegsiga ama kaabayaasha Adeegga lafteeda (tusaale ahaan, muddada booqashada bogga).
Inta aan adeegsaneyno Adeegyadeena, Waxaan ku weydiisan karnaa inaad na siiso macluumaad shaqsiyadeed oo la aqoonsan karo oo loo isticmaali karo inaan kula soo xiriirno ama lagu aqoonsado. Macluumaadka shaqsiga lagu garan karo waxaa ka mid noqon kara, laakiin kuma eka:
Xogta Isticmaalka si otomaatig ah ayaa loo ururiyaa markii la adeegsanaayo Adeegga.
Markii aad Adeegga ku gashid ama aaladda moobaylka, Waxaan u ururin karnaa macluumaadka qaarkood si otomaatig ah, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, nooca aaladda moobiilka ee aad isticmaaleyso, Aqoonsiga qalabkaaga gaarka ah, Cinwaanka IP-ga ee aaladdaada moobiilka, Moobaylkaaga Nidaamka hawlgalka, nooca biraawsarka internetka Internetka ee Mobilada ah ee aad isticmaaleysid, aqoonsiyeyaasha aaladda u gaarka ah iyo macluumaadka kale ee cudurka lagu ogaanayo.
Waxaan sidoo kale aruurin karnaa macluumaad uu biraawsarkaagu soo direy mar kasta oo aad soo booqato Adeeggeena ama markaad Adeegga ku hesho adigoo adeegsanaya moobaylka.
Waxaan u isticmaalnaa Kukiyadaha iyo teknolojiyadda raadraaca ee la mid ah si aan ula soconno waxqabadka Adeegyadeena oo aan u kaydinno macluumaadka qaarkood. Teknolojiyada raadraaca ee loo adeegsado waa astaamaha, calaamadaha, iyo qoraallada si loo soo ururiyo loolana socdo macluumaadka loona hormariyo loona falanqeeyo Adeeggeenna.
Waad u sheegi kartaa biraawsarkaaga inuu diido dhammaan Kukiyada ama inuu tilmaamo goorta loo dirayo cookie. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan aqbalin Cookies, Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad isticmaasho qaybo ka mid ah Adeeggeenna.
Kukiyada waxay noqon karaan Cookies "joogto ah" ama "Fadhi" ah. Kukiyada Joogtada ah waxay ku sii jiraan kombuyuutarkaaga gaarka ah ama aaladda mobiilka markaad Khadka ka baxdo, halka Kukiyada Fadhiga la tirtiro isla marka aad xirto biraawsarkaaga. Ka baro wax badan oo ku saabsan cookies: Dhammaan wixii ku saabsan Kukiyada.
Waxaan u isticmaalnaa labada kalfadhi iyo Cookies joogto ah ujeeddooyinka hoos lagu dhigay:
Kukiyadaha lagama maarmaanka u ah / Muhiimka ahNooca: Kukiyadaha Fadhiga Waxaa Maamulaya: Us Ujeeddo: Kukiyadaani waxay muhiim u yihiin inay ku siiyaan adeegyo laga heli karo Websaydhka iyo inay kuu suurta geliso inaad isticmaasho qaar ka mid ah astaamaheeda. Waxay ka caawiyaan xaqiijinta isticmaalayaasha waxayna ka hortagaan adeegsiga khayaanada ah ee akoonnada isticmaala. Haddii aan la helin Kukiyadaas, adeegyada aad codsatay lama bixin karo, Kaliya waxaan u adeegsanaa Kukiyadaas inaan ku siino adeegyadaas.
Nidaamka Cookies / Ogeysiiska Ogolaanshaha KukiyadaNooca: Kukiyada Joogtada ah Waxaa Maamulaya: Us Ujeeddo: Kukiyadaani waxay aqoonsadaan haddii isticmaalayaashu ay aqbaleen isticmaalka cookies-ka websaydhka.
Shaqeynta KukiyadaNooca: Kukiyadaha Joogtada ah Waxaa Maamulaya: Us Ujeeddo: Kukiyadaani waxay noo oggolaanayaan inaan xusuusano xulashooyinka aad sameysid markii aad isticmaaleyso Websaydhka, sida xusuusinta faahfaahintaada gelitaanka ama luqadda aad doorbideyso. Ujeedada Kukiyadaani waa inay ku siiyaan khibrad shaqsiyadeed oo dheeri ah iyo inaad ka fogaato inaad dib u soo gasho waxyaabaha aad doorbideyso marwalba oo aad isticmaaleysid Websaydhka.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cookies-ka aan isticmaalno iyo xulashooyinkaaga ku saabsan cookies, fadlan booqo Nidaamka Kukiyadaheena ama qaybta Kukiyada ee Nidaamkayaga Asturnaanta.
Isticmaalka Xogtaada Shaqsiyeed
Shirkadda waxay u adeegsan kartaa Xogta shaqsiga ujeeddooyinka soo socda:
Inay bixiyaan oo ay sii wadaan adeegyadayada, oo ay ka mid tahay la socoshada adeegsiga Adeeggeenna.
Si loo Maareeyo Koontadaada: si aad u maareyso Diiwaangelintaada adigoo adeegsanaya Adeegga. Xogta Shakhsi ahaaneed ee aad Bixiso Waxaad Ku Bixin Kartaa Adeegyo Kala Duwan Oo Adeeg Ah Oo Aad Adigu Tahay Adoo Ku Diiwaan Gelinaya.
Loogu talagalay fulinta qandaraaska: horumarinta, waafaqsanaanta iyo hirgelinta heshiiska wax iibsiga ee alaabooyinka, alaabada ama adeegyada Waxaad soo iibsatay ama heshiis kasta oo kale oo annaga nagala soo gala Adeegga.
Si lagulaula soo xiriiro: Si aad kula soo xiriirto emayl ahaan, wicitaano taleefan, SMS, ama qaabab kale oo u dhigma oo xiriir elektiroonig ah, sida ogeysiiska riixista ee mobilka ee ku saabsan cusbooneysiinta ama isgaarsiinta macluumaadka ee la xiriira howlaha, alaabada ama adeegyada qandaraaska leh, oo ay ku jiraan cusbooneysiinta amniga, markii loo baahdo ama macquul ah fulintooda.
Si laguu siiyo warar, dalabyo gaar ah iyo macluumaad guud oo ku saabsan badeecado kale, adeegyo iyo munaasabado aan bixinno oo la mid ah kuwii aad horay u soo iibsatay ama wax ka weydiisay haddii aad ka door bidday inaadan helin macluumaadkaas.
Maaraynta Codsiyadaada: Inaad ka soo qeybgasho oo aad maamusho codsiyadaada annaga.
Waxaan u wadaagi karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed xaaladaha soo socda:
Iyadoo ay la socdaan Adeeg Bixiyeyaasha: Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed Bixiyeyaasha Adeeg si aan ula socono oo u falanqeeyo adeegsiga Adeegyadeena, si aan kula soo xiriirno.
Ku wareejinta Ganacsiga: Waxaan la wadaagi karnaa ama aan u gudbin karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ee la xiriira, ama inta lagu guda jiro wadaxaajoodka, ka mid noqoshada, iibinta hantida Shirkadda, maalgalinta, ama helitaanka dhammaan ama qayb ka mid ah ganacsigeenna shirkad kale.
Ku Xiriira: Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga la-hawlgalayaashayada, taas oo markaa aan uga baahan doonno kuwa raacsan inay maamuusaan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Kuwa ku lug leh waxaa ka mid ah shirkaddayada waalidkeen iyo kaabayaasheeda kale, kuwa shuraakada ku shaqeeya ama shirkadaha kale ee aan xakameyno ama aan gacanta ku hayno.
La-hawlgalayaasha ganacsiga: Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga la-hawlgalayaashayada ganacsiga si aan kuugu soo bandhigno alaabooyin qaarkood, adeegyo ama dalacsiinno.
Isticmaalayaasha kale: marka aad la wadaageyso macluumaadkaaga shaqsi ama si kale aad ula dhaqanto meelaha kale ee dadweynaha adeegsadayaasha kale, macluumaadka noocaas ah waxaa arki kara dhammaan isticmaaleyaasha waxaana laga yaabaa in si furan loogu qaybiyo dibadda. Haddii aad la macaamilto isticmaaleyaasha kale ama aad iska diiwaangeliso adeegga saddexaad ee Adeegga Saxaafadda Bulshada, xiriirada aad ku leedahay Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Xisbiga saddexaad ayaa arki kara Magacaaga, astaantaada, sawirradaada iyo sharraxaadda Waxqabadkaaga. Sidoo kale, adeegsadayaasha kale waxay awoodi doonaan inay arkaan sharaxaadaada Hawshaada, kulaula soo xiriiraan oo ay arkaan Muuqaalkaaga.
Xannaaneynta Xogtaada Shaqsiyeed
Shirkadda waxay hayn doontaa Xogtaada Shaqsiyeed keliya illaa inta lagama maarmaanka u ah ujeeddooyinka lagu qeexay Nidaamkan Asturnaanta. Waxaan hayn doonnaa oo aan u isticmaali doonnaa Xogtaada Shaqsiyeed illaa inta lagama maarmaanka u ah u hoggaansanaanta waajibaadkayaga sharciga ah (tusaale ahaan, haddii nalooga baahdo in aan hayno xogtaada si aan ugu hoggaansanno shuruucda khuseysa), aan xallinno murannada, oo aan dhaqan-galno heshiisyadayada sharciga iyo siyaasadaha.
Shirkadda waxay sidoo kale hayn doontaa Xogta Isticmaalka ujeeddooyinka falanqaynta gudaha. Xogta Adeegsiga guud ahaan ayaa loo hayaa muddo gaaban, marka laga reebo marka xogtan loo istcimaalo in lagu xoojiyo amniga ama lagu hagaajiyo howlaha Adeegyadeena, ama Waxaa sharci ahaan nagu waajib ah inaan hayno xogtan muddo dheer.
Gudbinta Xogtaada Shaqsiyeed
Macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan Xogta Shakhsi ahaaneed, waxaa looga baaraandegaa xafiisyada Shirkadda ee ka hawlgala iyo meelaha kale ee ay ku sugan yihiin dhinacyada hawsha wada. Waxay ka dhigan tahay in macluumaadkan loo wareejin karo - laguna hayn karo - kombuyuutarro ku yaal meel ka baxsan gobolkaaga, gobolkaaga, waddankaaga ama awood kale oo dawladeed halkaas oo sharciyada ilaalinta xogta ay ku kala duwanaan karaan kuwa ka imanaya xukunkaaga.
Oggolaanshahaaga Nidaamkan Qarsoodiga ah oo ay ku xigto Soo gudbintaada macluumaadkaa waxay matalaysaa Heshiiskaaga wareejinta.
Shirkadda waxay qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka macquulka ah ee lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in macluumaadkaaga loola dhaqmo si ammaan ah iyadoo la raacayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo aan wareejinta Xogtaada Shakhsi ahaaneed u dhici doonin hay'ad ama waddan ilaa ay jiraan kontaroolo ku habboon meesha oo ay ka mid yihiin amniga amniga Xogtaada iyo macluumaadkaaga kale.
Siidaynta macluumaadkaaga shaqsiyeed
Haddii Shirkadda ku lug leedahay midowga, iibsashada ama iibinta hantida, Xogtaada Shakhsi ahaaneed waa la wareejin karaa. Waxaan bixin doonnaa ogeysiis kahor inta macluumaadkaaga shakhsiyadeed aan la wareejin oo aan ku xirnaan doono Nidaamka Khaaska ah ee Gaarka ah.
Xaaladaha qaarkood, Shirkadda waxaa laga rabaa inay shaaca ka qaaddo Xogtaada Shakhsiyeed haddii loo baahdo inay sidaas ku sameyso sharciga ama iyadoo laga jawaabayo codsiyada ansax ah ee ka imanaya mas'uuliyiinta dadweynaha (tusaale ahaan maxkamadda ama hay'ad dowladeed).
Shirkadda waxay shaaca ka qaadi kartaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed ee aaminka ah ee aaminka ah in ficilkan oo kale uu muhiim u yahay:
U hogaansan waajibaadka sharci
Difaac oo difaaco xuquuqda ama hantida Shirkadda
Ka hortag ama baarista khaladaadka suurta galka ah ee la xiriira Adeegga
Ilaali nabdoonaanta shaqsiyadeed ee Adeegga ama dadweynaha
Ka ilaali mas'uuliyadda sharciga
Amniga Xogtaada Shaqsiyeed
Amniga Macluumaadkaaga Shaqsiyeed ayaa muhiim noo ah, laakiin xusuusnow inaysan jirin hab gudbinta internetka, ama habka keydinta elektiroonigga uusan 100% aamin ahayn. In kasta oo aan ku dadaaleyno inaan u isticmaalno qaab ganacsi ahaan la aqbali karo si aan u ilaalinno Xogtaada Shakhsi ahaaneed, Ma dammaanad qaadi karno ammaankeeda buuxda.
Marka loo eego Qaybta Sharciga Madaniga ah ee California 1798 (Kalifoorniya ee Shine the Light law), dadka degan California oo leh xiriir ganacsi oo aasaasan annaga ayaa codsan kara macluumaad hal jeer sanadkiiba oo ku saabsan la wadaagga Macluumaadkooda Shakhsiyeed dhinacyada saddexaad ee ujeeddooyinka suuq-geynta tooska ah ee dhinacyada saddexaad.
Haddii aad jeceshahay inaad codsato macluumaad dheeraad ah hoosta sharciga California Shine the Light, iyo haddii aad tahay deggane Kaalifoorniya, Waad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya macluumaadka xiriirka ee hoos ku qoran.
Xuquuqda Asturnaanta Kaliforniya ee Isticmaalayaasha Yaryar (Qaybta Xeerka Ganacsiga California iyo Xirfadaha 22581)
Xeerka Ganacsiga iyo Xirfadaha Kalluunka ee California qaybta 22581 wuxuu u oggolaanayaa deganeyaasha California ee ka yar da'da 18 kuwaas oo ka diiwaangashan isticmaaleyaasha shabakadaha, adeegyada ama codsiyada inay codsadaan oo ay ka helaan ka saarista waxa ku jira ama macluumaadka ay dadweynuhu soo dhigeen.
Si aad u codsato ka saarista macluumaadka noocaas ah, iyo haddii aad tahay degane Kaliforniya, Waad nala soo xiriiri kartaa annaga oo adeegsanna macluumaadka xiriirka hoose ee lagu siiyey, waxaadna ku dari kartaa cinwaanka emaylka ee ku xiran Koontadaada.
La soco in Codsigaagu uusan dammaanad ka qaadayn dhammaystir ama dhammaystiran oo ah ka-koobnaanta waxyaabaha ama macluumaadka lagu qoro internetka iyo in sharcigu aanu oggolaan doonin ama u baahnayn in laga saaro duruufaha qaarkood.
Adeegayagu wuxuu ka koobnaan karaa xiriiriyeyaal degello kale oo aan annagu ka hawlgelin. Hadaad gujiso xiriir dhinac saddexaad ah, Waxaa lagugu jiheyn doonaa goobta qeybta saddexaad. Waxaan si adag kugula talineynaa inaad dib u eegto Nidaamka Asturnaanta ee degel kasta oo aad booqato.
Waxaan cusboonaysiin karnaa Nidaamkeena Qarsoodiga waqti ka waqti. Waanu kula soo socodsiin doonaa wixii isbedel ah annaga oo ku dhejin doona Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah boggan.
Waxaan kugula socodsiin doonnaa iimayl iyo / ama ogeysiis caan ah oo ku saabsan Adeegyadeena, kahor intaan isbeddelku waxtar yeelan oo aan cusbooneysiinno taariikhda "Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay" ee ugu sarreysa Siyaasaddan Asturnaanta
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, Waad nala soo xiriiri kartaa: